Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere 1 Ele Tẹsalonika 3
1 Kpa a nwée rikne naagidne a berere, a kpebi ọ dazịri nụ Atẹnsi n'iwhuru aị. 2 Kam kpayarụ, a ziyaru Timoti nnwọ nda aị nụ nye sno aị nọornu ẹrnu Chiokike naagbasa izi ọma Karaịsi, ma ọ kwnagidne anụ, mee masị ma ọkwnata ovu anụ si rikne. 3 Anụ kwé nhne ọrnurna mee nye ọbula whọga n'ọnodi a. Anụ magwụ nhne ọrnurna jọodonu nye Karaịsi ọbula. 4 Nga aị nụ anụ zị, a kannụ anụ nụ be jaakpakna aị ẹhni. Anụ whnụrnu nụ ka mezuru. 5 Kam kpayarụ, kpa me nwée rikne gwuzoli nụ mkpọma m nụ nhne gbasịri anụ, m ziya Timoti ma m mahịa m kpa anụ nụ n'ọkwnata ovu. Ovu larụ m mini ma nye ọrnurna wam ọ kwnamana anụ n'ọkwnata ovu, ma ẹrnu aị nụ risi anụ bụru nhne etekne.
Izi nkasi ovu Timoti
6 Nga Timoti hi hne anụ zị hiehna, gweyannụ aị ọtnutnu ọma gbasịri ọkwnata ovu nụ ọwhnun'anya anụ, ọ kannụ aị nụ anụ neechenwanya nhne bụru ọma gbasịri aị ige ọbula, nụ ọ nọogwnu anụ ọ whnụ aị anya lele kpa ọ nọogwnu masị aị ọ whnụ anụ anya. 7 Kam kpayarụ, rụmu nda aị, a nwernu ọkasi ovu nụ rime awhnụwhnu aị kwnornu ọkwnata ovu anụ. 8 N'ezi ọka, a nwernu bụdnu ikne kwnornu nụ anụ gwuzo kwem nụ rime Nyenwe aị. 9 A jéenwe rikne tụnu Chiokike mmamma kpa o kwesiri kwnornu nụ ovu ọso n'ọnu a nwernu nụ ruwhnu Chiokike nụ risi anụ. 10 A zị neekpe okpukpe iwhnehnie nụ abalị ma a nwe rikne whnụ anụ anya ma a nyee anụ nhne ke zị anụ mkpa n'ọkwnata ovu.
11 Kịtna, a neekpe Chiokike Nda aị n'iwhuru a nụ Nyenwe aị Jizọsi gbamanụ aị apna ma a vakwnusi anụ. 12 Nyenwe aị mee ma ọwhnun'anya anụ ba aba k'agịda nụ risi nye ọbula, lele kpa ọwhnun'anya aị zị nụ risi anụ. 13 Chiokike gba anụ inwe ma anụ zịri snam, zịri masị nsọ nụ ruwhnu Chiokike Nda aị nga Nyenwe aị Jizọsi nụ ele nsọ a jaava.